Kuderedzwa kwekugadzirwa kwesimbi yekugadzirwa | TOPTAC
Inokanganiswa nekukurumidza kwekuvaka kwenzvimbo yekuvaka muhafu yechipiri yegore, kudiwa kwawedzera. Naizvozvo, kubva pakati nepakati pakupera kwaGumiguru, masimbi enzvimbo airatidza kudzikira kwakapetwa ka7 akateedzana nguva, achidambura zvakananga huwandu hwepadiki hwekutanga mukati megore.
Zvinoenderana ne data rekutarisa, kubvira waNovember 30, 2018, hushamwari zvesimbi mumaguta makumi matatu neshanu nyika yose aive mamirioni mazana manomwe nemakumi matatu nemakumi matatu, kuderera kwematani 168,000 kubva svondo rapfuura, kuderera kwematani miriyoni nemakumi manonwe kubva panguva imwe chete yekupedzisira. mwedzi, zvichienzaniswa naKurume 9, 2018. Pazuva, huwandu hwepamusoro hwekutenga hwematani mamiriyoni zana nemakumi manonwe nemakumi manonwe nemakumi manonwe nemakumi gumi nemakumi manonwe nemakumi matanhatu, kudonha kwemakumi matanhatu muzana, nekuderera kwematani 186,000 zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rakapfuura.
Pamusoro pezvo, huwandu hwezvivakwa zvekuvaka pamwe nepeti zvakare hwakaderera kwemavhiki manomwe akateedzana. Maererano nedatha, kubvira raNovember 30, huwandu hwesimbi yekuvaka mumaguta akakosha muChina hwaive mamirioni mazana matatu nemakumi matatu, zvichidzika nematani zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri kubva svondo rapfuura, zasi 22.47% kubva panguva imwe cheteyo yemwedzi wapera uye zvichidzika 9.4% kubva zvakafanana mwaka wegore rapfuura. Matura eRebar mumaguta akakosha emamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemazana matatu, mazana matatu ematani, kubva pamakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva muzana, kubva pasi svondo mazana maviri nenomwe kubva muzana. Hurefu hwemapureti apakati uye anorema mumaguta akakosha muChina aive matani zviuru mazana mapfumbamwe nemazana matanhatu, zvichidzika matani zviuru gumi nezvitanhatu kubva svondo rapfuura, pasi 10.12% kubva panguva yakafanana yemwedzi wapfuura uye pasi 2.95% kubva panguva imwe cheteyo yegore rapfuura.
Nguva yekutumira: Kubvumbi-11-2020